Home YURUB IYO YURUB Harry Winks Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska "Iniesta yar". Dabeecadeena Harry Winks iyo akhristaha sheekooyinka aan la isku qorin Xaqiiqooyin ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimadiisa ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, taariikhda qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, dadku way ogyihiin muuqaalkiisa qurxoon, qaab yar iyo qaab cayaareed. Si kastaba ha noqotee, kaliya qaar ka mid ah tixgelinta Harry Winks 'Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography'Hore iyo Qoyska
Bilaabidda, magaca buuxa waa Harry Billy Winks. Harry Winks sida uu ogyahay wuxuu ku dhashay maalinta 2 ee bisha Febraayo 1996 hooyadiis, Anita Winks iyo aabbaha, Gary Winks ee Hemel Hempstead, Boqortooyada Ingiriiska.
Harry wuxuu ku dhashay qoys kubbada cagta jecel. Aabaha dhalay Gary wuxuu ahaa ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee kubada cagta ee u soo ciyaaray Hemel iyo Berkhamsted. Qoyska Winks wuxuu ahaa taageere Spurs oo waqti dheer ah tan iyo markii uu 1984 ku guuleystay Koobkii UEFA Cup.
Isagoo ka hadlaya taariikhda qoyska ama asalkiisa, Harry Winks wuxuu ka yimaadaa qoys reer Isbaanish ah hooyadiis iyo awoowe. Hase yeeshee, wuxuu ku faanaa inuu yahay British ah aabihiis. Harry wuxuu ku soo koray walaashiisii ​​yaraa ee loo yaqaan 'National' kaas oo uu aad u ilaaliyo.
Hadday joogaan guriga ama adeerka ilma adeerka, Harry sawir hoose ayaa waligiis eegaya walaashiisa walaasha yar.
Maanta, aad ayay u qurux badan tahay, waana ku faraxsan tahay dalka Mareekanka si ay u aragto walaalkeed weyn, qofkii ugu dhowaa iyo lamaanihii hore ee denbigu helay guulo badan oo kubadda cagta ah.
Waqtigan xaadirka ah ee qoraaga, qofna kuma jiro adduunku waxa uu leeyahay dammaanad xooggan kaas oo la wadaago inta u dhaxeysa Harry, National iyo Anita.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Dhismaha Xirfadaha
Isagoo ka hadlaya inuu yahay taageere Tottenham, Harry's dad Gary mar ayaa yiri:
Dabcan Harry waa taageere Spurs ah, taasoo igu qasabtay aniga!
Harry sida hooyadiis iyo aabihii waxay ahaayeen a Tottenham Hotspur xitaa ka hor inta uusan bilaabin kubada cagta. Harry ayaa ka qeyb galay cayaarkiisii ​​ugu horeeyay ee White Hart Lane markii uu ahaa lix sano jir. Raadinta waxyaabaha la jecel yahay Michael Carrick, Robbie Keane iyo Teddy Sheringham wuxuu ku dhiirrigeliyay inuu bilaabo inuu ka leexiyo wax kasta oo u eg kubad kubada cagta ah.
Isagoo ka hadlaya khibrada kubada cagta ee wiilkiisa, cunugiisa, Harry Wink hooyadiis Anita ayaa mar u sheegtay Gazette:
"Xitaa sida cunug yar oo Harry uu ku ciyaari lahaa caws la duubay. Waxa uu ku riixi lahaa meel walba meel walba. Kadibna wuxuu u dhaqaaqay kubbadda teniska. Wuxuu had iyo jeer ku haraayaa hareeraha guriga oo dhan, anigana waa iga careysiiyay! "
Haddii aysan la laadin kubadda kubada cagta ee gudaha ama gudaha gurigiisa, Harry waxaa lagu arki doonaa meel u dhow agagaarka boostada David Beckham iyo Michael Owen.
Inkastoo uu Harry jacayl u qabo Spurs, wuxuu go'aansaday inuu isku sharaxo shirarka England iyo gaaban. Isagoo eegaya sawiradiisa kor ku xusan, waxaad arki doontaa inay aheyd waxyaabaha uu jecel yahay.
Wakhtiga qorista, Jersey ee dalka England ayaa ku haboon isaga.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Bilowga Hore Shaqo
Awoodda Harry waxaa markii ugu horeysay lagu arkay da'da 5 markii waalidkiis uu ku qorey liiska Ross & Andy's Soccer Camps. Waxa uu sii waday inuu la ciyaaro Echoes FC oo ku yaal Hemel Hempstead halkaasi oo xirfadiisa kubada cagta uu noqday mid aad u wanaagsan.
Harry waxaa loo yaqaanaa qof leh tamar fiican iyo inkastoo uu qaabdhismeedkiisu hooseeyo, wuxuu weli wadi doonaa garoonka garoonka oo leh mashiinka wanaagsan. Hore, Harry wuxuu horay u lahaa waxbarashadiisa hore ee kubada cagta ee la yiraahdo "Cavendish School" oo uu ka qalin jabiyay da'da 11.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Horraanta Life ee Spurs
Dhibaatada uu u leeyahay inuu kubadda gacanta u galo sida caruur, Harry waxaa lagu soo jeediyay macalinkiisa Ross & Andy's Soccer Camp si uu uga qeyb galo tijaabooyinka Tottenham Hotspurs. Wuxuu ka soo wareegay oo kaqeyb qaatay kooxda. Xitaa tababaraha Tottenham, kooxo badan ayaa wali ku adkeysanaya da'yar.
Harry's waalidkiis Anita iyo Gary waxay doonayeen inay walwal geliyaan waxyaabo badan oo uu Harry ka sameeyay maalmaha hore ee Tottenham. Marka hore, sida dhalinyaro dhallinyaro ah, Winku waxa uu ka soo gaaray dhaawacyo sii kordhaya iyo dhibaatooyin danbe. Inkastoo taasi, madaxa akadeemiga McDermott uu aaminsan yahay in uu yar yahay sida uu ku sameeyay kuwa soo-gaba-gaboobay, sida Kane iyo Andros Townsend. Xitaa Teddy Sheringham ayaa xiiso u qabay dhalinyarada Wink iyo Scott Parker waxay u muuqatay sidii qof khibrad leh.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Go'aanka Weyn & Kor u Qaadista Wanaajinta
Si uu naftiisa ugu riyaaqo riyadiisa, Harry wuxuu go'aansaday inuu ka guuro guriga qoyska da 'da' 16 si uu ugu noolaado meel u dhow garoonka tababarka Spurs. Go'aankaasi ma ahayn mid sahlan ee qoyska Winks. Sida laga soo xigtay hooyadiis Anita;
Harry waa inuu isbedelaa, maskax ahaan. Waxa uu ahaa mid aad u cakiran, oo ka soo guuray da'daasi waa mid aad u adag. Saddexdii naloo mid ah - aniga, Gary, iyo Qaranka ayaa istaagay oo qayliyey markii uu xiray albaabka hore ee hortaga.
Harry waalidiintiisa waxay arki karaan hal fiidkii toddobaadkii. Sida laga soo xigtay Harry, oo ka soo guuray guriga qoyska si uu ula noolaado dadka aan waligiis la kulmin waxa laga yaabaa inuu ahaa waxa ugu adkaa ee uu ku sameeyay noloshiisa oo dhan. Harry wuxuu ku noolaa xaafadda Southgate, oo ah xaafad ku taal waqooyiga London. Waxa uu la joogay lamaane lamaane ah oo magaciisa la yidhaahdo Lesley iyo Matt, oo gurigiisuna uu ku dhow yahay garoonka tababarka dhalinyarada Spurs. Nasiib wanaag, Matt oo ahaa macallin wadista baabuurta ayaa baray Harry sida loo wado.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Kusoo caan bax
Harry ayaa go'aansaday inuu noqdo qof xirfadle ah ma uusan u gudbin sida rikoodh. 27 July July 2014, wuxuu qandaraaskiisa ugu horeeyay u saxiixay Tottenham ka dib markii uu soo jiitay Mauricio Pochettino kuwaas oo si xor ah u daawanayay fiidiyoowgiisa.
Pochettino wuxuu u arkay Harry inuu yahay ciyaaryahan sida walaalaha Isbaanish ah Xavi iyo Iniesta. Waxa uu sidoo kale fiiriyey isaga oo si buuxda uga duwan ciyaartoydiisa khadka dhexe. Victor Wanyama, Eric Dier, Mousa Dembélé iyo Moussa Sissoko. Harry's dabbaaldiisii ​​ugu horreysay ee horyaalka wuxuu muujiyay sida uu isaga iyo Mauricio Pochettino ayaa horumariyay xiriir adag tan iyo kulankoodii ugu horeeyay.
Dhibaato, Harry ayaa loogu yeeray xulka England inkastoo uu afar gool ka dhaliyay horyaalka Spurs. Gareth Southgate isaga oo u mahadceliyay rikoodhkiisa.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Nolosha Xiriirka
Ma ogeyd?… Dhamaan dhalinyaro filim ah, gabadha ayaa inta badan ku dhici doonta kubada caansan. Qaar ka mid ah nolosheeda gabadha, si qoto dheer, waxaa jira had iyo jeer rabitaan ah in la soo bandhigo xiddig xiddig ah. Nasiib darro, Filimadu si adag uma tusi karaan hoos u dhaca shukaansiga kubada cagta. Tani waa hal sabab oo Harry uu u ahaa hal sano inta lagu guda jiro sanadaha hore ee xirfadiisa waayeelka ah.
Sheekada xiriirka koowaad ee Harry ayaa timid markii uu da'diisu ahayd 22 (July 2018) markii la arkay iyada oo la yiraahdo gabadha dhabta ah ee muuqaalka Britishka, Rosie Williams oo ah 4 sanokiisa senior. Labada nin ayaa la arkay markii ay ka baxeen Hotel 5, Hotel London Shangri-La.
Sawirka, Harry wuxuu u muuqday inuu yahay gabadha ugu fiican ee Rosie isaga oo albaabka u furay iyada. Tani waxay ahayd waqti Rosie oo kaliya laga daadiyay muuqaalka dhabta ah ee British Love Island. Isku-daba-ridida jilicsanaha jaalaha ah, gabadha reer Welsh waxay ku khasbaneyd inay soo bandhigto muuqaal rogrog ah oo loogu talagalay ninkeeda. Waqtiga oo kaliya ayaa kuu sheegi doona hadii Harry uu u qaadan doono sidii saaxiib ama xaas.
Harry Winks Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Untolded Biography' Naftaada Shaqsiga
Harry waxa uu ku dhashay shil iyo xasillooni, laakiin dhinaca kale, wuxuu noqon karaa mid xasaasi ah oo awood leh. Sida lagu arko maalmaha dhallinyaradiisa, waa qof si fudud u qabsan kara isbeddelka deegaanka ama tamar cusub oo ku wareegsan.
Ma ogeyd?… Si ka duwan ciyaartoyda kubada cagta, Harry Winks maahan mid aad ugu dhow taageerayaasha. Tani waxay ahayd sababtoo ah markasta oo uu si xun u abaal mariyay wanaagga. Hadda waxaan kuu sheegi karaa waxa dhacay!
Harry ayaa mar hore lagu arkay koox ku taal Watford isagoo taageere u ah, kaasoo si weyn uga codsaday xiddiga qadka dhexe inuu sawir kula qaato Winks oo aan ogeyn ujeedada ugu weyn. Xoogaa, oo ah taageere magac leh oo magaciisa la yiraahdo Nikhil Shah oo sawirkiisa ku daabacay bogga warbaahinta bulshada ee soo bandhigay Winks oo ku biiray kooxda isagoo wata dhaawacyo.
Taageerada ayaa sidoo kale tagtay ilaa iyo intii isku dayday in ay la xiriirto The Sun si aad ugala hadasho iibinta sawirka oo laga yaabo in ay soo maraan. Hoos waxaa ka muuqda sawir gacmeed oo sahlan, laakiin Nikhil Shah oo sharaf xun u qoray ka dib markii uu sawir ku geliyay xisaabtiisii ​​Instagram.
Tani waxay sharraxaysaa sababta Winkuhu uusan u helin wax aad u badan oo taageerayaal ah gaar ahaan meelaha khaldan. Inkastoo dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu helo qiimo jaban, Shah ayaa burburiyay taageerayaasha iyagoo isku dayaya in ay ka baxaan Wink.
CoD Fan: Harry wuxuu tixgelinayaa inuu naftiisa u tiirsan yahay Wacitaanka Duty.
Harry inkastoo jadwalka kubada cagta ee mashquulka ah uu wali helayo wakhti uu ku soo galo dhacdooyinka Call of Duty.
Harry ma aha sida la qabatimay sida Hector Bellerin kaasoo mar hore ku soo ciyaaray CoD for 30 toddobaadkii.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin inaad akhrisato Harry Winks Carruur Dabeecada iyo Xaqiiqooyinka Aan Biyeyn Karin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
YURUB IYO YURUB353